GEERIDII GADHLAY SHEEGAYAAN GACAL HA WAAYAANE
Geeridu waa xaq. Nafkastaaba way dhandhamin doontaa geerida. ILaahay naxariistii janno ha ka waraabiyee waxa dhowaan ku geeriyooday magaalada Jabuuti Abwaankii caanka ahaa Ibraahim Sulaymaan "Gadhle". Wuxuu ahaa hal-abuure safka hore kaga jirey suugaanta soomaaliyeed. Wuxuu ahaa halgamaa adeegsan jiray haybaddiisa hal-abuurnimo. Dhinaca fanka kale wuxuu ahaa nin qoraa ah oo qoray rawaayado aad u farabadan....
Naxdinta aan ka naxay geerida marxuum Ibrahim "Gadhle", waxaan xasuustay gabaygii baroor-diiqda ahaa ee uu tiriyey ilaahay haw naxariisto'e Cali Jaamac Haabiil, seben haatan laga joogo qarni ku-dhowaad, mar loo sheegay nin uu aad uga naxay geeridiisa oo la odhan jiray Xirsi.
Waxaana ka mid ahaa gabaygaas:
Faaraxow galgaladkaan dhigiyo, gama' la'aantayda
Gogoshaan ku jiifsaday hurdada, goodkii igu yaacay
Gasiinkii la ii dhigay waxaan, gawska uga daayey
Gablamooyin waxay ii wadeen, guuldarriyo hooge
Gabbal baa u dumey reerihii, geliga Booc yiille
Abidkii rag waa go'i jiree, tanise waa gaw e
Lixhal oo u wada gaar ahaa gocanayaa mooyi:
Hadaba waxaan leeyahay: "Geeridii Gadhlay sheegayeen gacal ha waayeene". Inkastoo geerida siyaabo kala jaad jaad ah looga naxo, balse ta muhiimka ahi waxa weeye in qofkastaaba uu xasuusto in maalini sugayso oo uu u sii shaqaysto. Ujeedadu maaha muxuu hebel u dhintay, ee waa xasuus loo baahanyahay in aad ku xasuusato maalintaada. Dhinaca kale qofba waxbaa lagu xasuustaa. Waxaana jira qof dad badan u noqda tusaale. Waxaan xasuustaa maansadiisii yaabka lahayd ee uu marxuumku kaga hadlayey keligii taliyihii dalka ka talinayey (Maxamed Siyad Barre) markii la ridey, isla markaana uu kala dardaarmayey cid alla ciddii dalka maamulkiisa qabata. Ma hubo--- waxaanse ku wadaa inay maansadaasi soo baxday 1991-kii.
Dhextaalkeeduna ahaa "Ducataye maxay dhali?" Haddaan maansadaa waxyar kasoo qaato,
Waar! hoy! dadkaygoow
Laba daan dhexdoodiyo
Dalqo bahal qof galayoo
Dirqi iyo tu fool adag
Debedda ugu soo baxay
Halkii shalayto lagu dilay
Ma dareemi waayee
Durba miyaa iloowdeen
In dadkiinii maqanyahay
Isla maansadaa isagoo qaabkale u dhigaya oo tilmaamaya tusaalaha ay maansadaasi
xanbaarsantahay ayuu yidhi:
Dibu gocasho weeyaan
Duul aan baraarugin
Intuu ololku dami laa
Daantaa wixii jiray
Dabayl qaadda weeyaan
Waxa daafta kale yaal
Daad ha qaado weeyaan
Ku dareerro weeyaan
Halla daaqin weeyaan
Ilaahay haw naxariistee, xigmadda uu ka tegey abwaan Ibraahim "Gadhle" bal u fiirso baydkan iyo sida uu u tilmaamayo in danta iyo xarrago ay u kala fog yihiin.
Shaadhkaaga duugga ah
Yaanuu damacu kaa furin
Waa dillaacsanyee tuur
Dantu kuma faraysee
Dib u sii karkaro bay
Dooddani ku leedahay
Xariir taal Dukaan
Indhaha daawo kugu yidhi
Iyagaa danbiile ah.
Maansadaas oo dheerayd waxaan ku soo koobayaa baydkan talada iyo digniinta isugu
Daadays ka curataye
Soo dununuc reentaye
muska degelka saartaye
Ducataye maxay dhali
Ma siday dorraatoba
Markii sheekhu daakiray
Weeraha u ducatay
Maantana dugaag dhali?
Mise daabbad awriyo
Rati doobbir badaniyo
Biyo madaadiyey dhali?
Ilaahay naxariistii janno ha kawaraabiyo marxuum Ibraahim "Gadhle", aamiin ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan dadka soomaaliyeedna samir iyo iimaan ha kasiiyo aamiin. Marxuumku wuxuu ahaa taallo u taagan suugaanta soomaaliyeed wuxuu ahaa halgamaa aan eraygiisa la baqan, wuxuu eraygiisa ugu hiiliyey dad badan oo la dulmayey, dhibaato iyo caga juglaynna lagu hayay. Waxa lagu xasuusan doonaa wanaag fara badan oo uu dadkiisa uga tegay.
Waxa lagu xasuusan doonaa maansada aan dhiman oo jiri doonta intii ilaahay ka dhigo. Maansadan hoosta ku qoran wuxuu tiriyey xilligii halgankii reer Jabuuti ay xornimadooda u halgamayeen. Waxaana loogu luuqeeyaa maansadaas si aad iyo aad.......... aad uga jidhidhicoonayso oo ruxaysa
Xikmadda ama halkudhegyada uu marxuumku ka tegey waxa ka mid ah.
"Maalkaagu yuu noqon, mid masaajid lagu gubo"
Sayid Maxamed Yusuf "Dhegey